Mazuva Akakosha uye Matamba Aunofanirwa Kuziva Kutungamira kupinda muZororo ra2014 Mwaka | Martech Zone
Gore rakapera, mutengi muvashanu akaita Kisimusi yavo YOSE kutenga online! Yikes… uye zvakafanotaurwa kuti gore rino, chetatu chevashambadzi vese vepamhepo vanozoita zvavanotenga kuburikidza nefoni yavo kana piritsi. 44% vari kutenga kubva pahwendefa uye vangangoita vese vari kushandisa desktop yavo kutenga. Iwe uri muchimiro chakaomarara gore rino kana usati wagadziridza masaiti ako uye maemail evanotenga nharembozha - asi hazvina kunonoka kuyedza kuti zviitwe.
Kune matanhatu akakosha misi aunofanirwa kuve nehukama, nhare, uye email kusundira mumutsara uye wakagadzirira kusimudzira gore rino. Semutengesi wepamhepo, ini ndainyanya kutarisisa pakupera kwesvondo mushure meKutenda kusvika paKisimusi kuti nditarise pakutumira mameseji.
Nguva yekutenda iri rini? (US) - China, Mbudzi 27
Chishanu Chiri rini? - Chishanu, Mbudzi 28
Riri Bhizinesi Diki Mugovera? - Mugovera, Mbudzi 29
Rini Cyber ​​Muvhuro? - Muvhuro, Zvita 1
Hanukkah iripi? - Chipiri, Zvita 16 kusvika 24
Nguva yeKisimusi iri rini? - Chitatu, Zvita 24
Zuva reKisimusi rini? - China, Zvita 25
Zuva reBoxing rini? - Chishanu, Zvita 26
Uye zvechokwadi, usasiye mazuva ekupedzisira egore kune avo vanotevera-zororo vatengi. Vanoda chibvumirano chakanaka.
Tarisa uone ese asinganzwisisike manhamba akanyorwa mune ino Yekutengesa Kutengesa Infographic nechikwata pa AmeriCommerce.
Tags: musi wezuvazuva rehosiKisimusiKrisimasi evecyber mondayHanukkahzororo nhare yekutengesakutengesa zororoinfographicmobile kutengesabhizinesi diki nemugoverazvokuvonga